AnyDesk: Beddelka ugu fiican ee maaraynta kombiyuutarada fogfog | Laga soo bilaabo Linux
AnyDesk: Beddelka ugu fiican ee maaraynta kombuyuutarrada kumbuyuutarka
AnyDesk waa bedel wanaagsan oo iskutallaab ah oo lagu maareeyo desktops-yada fog, oo hadda ku jira nooca cusub ee 5.0.0. Sidaa darteed, waxay noo ogolaaneysaa inaan ku xirno kumbuyuutar fog, labadaba dhamaadka xafiiska ama guriga iyo meel fog oo ku yaal meel kasta oo adduunka ah. AnyDesk waxay awood u leedahay inay siiso iskuxiraha desktop fog ee aaminka ah oo lagu kalsoonaan karo adeegsadayaasheeda, kuwa isticmaala guryaha iyo xirfadleyda IT-da ee socda.
Xalkan softiweerku waa soo dejin bilaash ah, qiimeyn bilaash ah iyo adeegsi gaar ah. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay suurtogalnimada inay ku bixiso iyada si loo kordhiyo faa'iidooyinkeeda. Waxaa si weyn kugula taliyay bulsho aad u tiro badan oo adeegsada adduunka oo dhan, maadaama ay leedahay astaamo aad u fiican (shaqooyin iyo astaamo), taas oo ka dhigaysa musharax wanaagsan in la badalo barnaamijyada GNU / Linux ee bilaashka ah iyo kuwa la midka ah markii la doono.
1 Taariikhda Soomaaliya
2.2 Ugu talagal
3 Soo Degso oo Rakibo
AnyDesk waa codsi ay abuurtay shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo «AnyDesk Software GmbH»Kaas oo lagu aasaasay Jarmalka 2014. Ahaanshaha AnyDesk barnaamijkeeda gaarka ah ee desktop-ka fog wax soo saar ilaa maanta ah oo ay soo dejiyeen in ka badan 150 milyan oo isticmaaleyaal ah oo adduunka ku nool, celcelis ahaan xilliganna ah 5 milyan oo soo dejin bille ah.
Inta badan guushan waxaa sabab u ah AnyDesk oo ah softiweer ku saleysan koodhkeeda gaarka ah ee loo yaqaan "DeskRT", kaas oo u oggolaanaya iskaashi ficil ahaan daahitaan la aan, iyadoo aan loo eegin sida ugu dhow ama fog ee kombiyuutarka la maamuli karo uu noqon karo.
Qaabkeeda hadda jira 5.0.0, taariikhda sii deynta 24 / 04 / 2019, waxaa ku jira wararka soo socda:
Awoodaha cusub ee wareejinta faylka: iyada oo loo marayo iHirgelinta isbeddelada kujira garaafka garaafka si ay ugu wareejiso feylasha macaamiisha dhexdooda.
Awooda is-daahfurka: waayo, u oggolow raadinta inta u dhexeysa kombuyuutarrada macaamiisha AnyDesk.
Hirgelinta tallaabooyinka amniga: adeegsiga «Tunnelka TCP »isku xidhka meelaha fog fog.
Dayactirka bugta cusub Adoo hagaajinaya ama xallinaya cilladaha badan ee hore iyo kuwa cusub, waxay hadda kordhiyaan xasilloonida, adeegsiga iyo waxqabadka arjiga.
Astaamaha cusub: Xirmo cusub oo ah astaamaha gudaha ee la cusbooneysiiyay ee ku jira garaafka garaafka.
Waxqabadka: Koodhadhka lahaanshaha iyo hal-abuurka cusub ee la isticmaalay, DeskRT, wuxuu ka dhigayaa AnyDesk codsi awood u leh isku-xoqidda iyo u gudbinta xogta muuqaalka ee u dhexeysa kombuyuutarrada, heer heer sare ah oo wax-ku-ool ah, oo u dhigma alaabada heerka sare leh. Waxay ku fulisaa hawlaheeda tirada ugu yar ee dhibaatooyinka ama dhibaatooyinka, iyada oo leh xayeysiisyo keliya 100 KB / Sec. Maxaa ka dhigaya AnyDesk inuu yahay barnaamij ku habboon in lagu maareeyo kombuyuutarrada meelaha fogfog leh ee leh xiriirka internetka oo liita, iyadoo lagu gaarayo muuqaallo siman oo keliya 60 FPS oo ah shabakadaha maxalliga ah iyo inta badan isku xirnaanta internetka.
Amniga: Tikniyoolajiyadda TLS 1.2 ee la adeegsaday, waxay maamushaa inay ka ilaaliso kumbuyuutar kasta marinka aan la oggolaan. Maaddaama "RSA 2048" laga hirgeliyay isku xirnaanta, taas oo ah, 2048-bit asymmetric encryption encryption key, si loo xaqiijiyo xiriir kasta. Intaas waxaa sii dheer, qof kasta oo gacanta ku haya kumbuyuutar wuxuu ku heli karaa marin looga helo kombuyuutarro ay ku qoran yihiin liisaska cad ee dadka lala xiriiro. Tani waxay xaqiijineysaa in dadka idman oo keliya ay sameyn karaan xiriir.
Fahmidda: AnyDesk waxay maamushaa inay gasho kombuyuutar kastoo aan loo eegin sida ay u fog tahay ama u dhowdahay, iyadoo la fududeysan karo Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa barnaamijyada Macaamiisha la maareeyay, marin loo helo iyada oo aan la ilaalin, iyada oo kaliya la hirgaliyo lambarka sirta ah. Iyo muuqaalkeeda qaab-dhismeedka badan ayaa ka dhigan in laga isticmaali karo barta aad doorbideyso, iyadoon loo eegin inay tahay Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD, iOS ama Android. Intaas waxaa sii dheer, AnyDesk way fududahay in la soo dejiyo (+/- 5MB) mana qabsato boos badan Hard Drive-ka, waana wax aad uga yar kuwa la midka ah.
Maamulka: AnyDesk waxay kuu ogolaaneysaa inaad lasocoto xiriirada iyo isku xirnaantooda adoo adeegsanaya jadwal dhisme ah, kormeeraya cidda khadka tooska ah kujirta iyadoon looxirin. Waxay sidoo kale ogolaaneysaa adeegsiga magac aan caadi aheyn, oo loo yaqaan "AnyDesk ID" kaas oo la xiriira magaca isticmaale ee shaqsiga ah si loo sharxo kombiyuutarka la maamulay, kaas oo astaan ​​sidoo kale loogu daro, si loo fududeeyo helitaanka iyo iswaafajinta iyadoo la adeegsanayo astaan ​​astaan.
Dheecaan: AnyDesk waxaa loo isticmaali karaa bilaash, laakiin waxay isticmaashaa ruqsad isticmaale oo dabooleysa dhammaan noocyada mustaqbalka, iyada oo aan laga soo saarin wax cusbooneysiin ah. Sameynta noocyadeeda oo dhan oo iswaafajinaya midba midka kale.
Soo Degso oo Rakibo
AnyDesk qaabkeeda hadda ee 5.0.0 iyo kiiskeenna, Linux, waxay leedahay fursado dhowr ah oo lagu rakibo. Si kastaba ha noqotee, waxaan u soo dejineynaa xirmada DEBIAN / Ubuntu / Mint oo hadda leh magaca nooca 64 Bit, kuwa soo socda: "Anydesk_5.0.0-1_amd64.deb". Kaas oo waliba kaliya culeyskiisu yahay 4,3 MB.
Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay tahay aagag badan oo ka mid ah Nidaamyada kale ee Hawlgalka, waxay leedahay noocyada soo socda, cabirrada iyo qaababyada:
Windows, v5.0.5 (2,8 MB): faylka .exe
MacOS, v4.3.0 (3,8 MB): faylka .dmg
Android, v5.0.2 (7,6 MB): faylka .apk
macruufka, v2.7.3 (6,1 MB): Fayl .ipa
FreeBSD, v2.9.1 (2,1 MB): faylka .tar.gz
Raspberry Pi, v2.9.4 (2,1 MB): faylka
Si kastaba ha noqotee, xulashada Linux dhammaan xulashooyinka lagu muujiyay sawirka soo socda ayaa la heli karaa:
Kadib rakibida xirmada "anydesk_5.0.0-1_amd64.deb" iyadoo la adeegsanayo foomamkii horay loo yaqaanay, ee loogu talagalay qaabka xirmada, waan wadi karnaa arjiga, laga bilaabo barnaamijka barnaamijka GNU / Linux oo sii wad inaad habayn iyo tijaabiso. Anigu shaqsiyan waxbadan ayaan ugu isticmaalay Debian iyo Ubuntu oo salka ku haya Nidaamyada Howlgalka dhib la'aan.
Asal ahaan ka dib markii la rakibo waxay diyaar u tahay in la isticmaalo, Tan iyo bilowgii ugu horreeyay waxaa si otomaatig ah loogu qaabeeyey qaab ahaan "AnyDesk ID" iyo Username (Team) u gaar ah. Oo waxay ahaan doontaa oo keliya haddii loo baahdo in la hagaajiyo waxyaabaha sida:
Furaha otomaatiga ah ee lagu galo
U badal magaca isticmaalaha Aqoonsiga AnyDesk ee Wajahadda
Dheellitir xuduudaha shabakadda haddii ay dhacdo wakiil
Ku hagaaji cabbirka tayada gudbinta ee shabakadaha xaddiga yar.
AnyDesk ma aha oo kaliya codsi aad u fudud soo dejin, rakibid, qaabeyn iyo adeegsi, laakiin sidoo kale waxay leedahay waxqabad wanaagsan iyo xasilooni aad u fiican. on dhufto ee kala duwan ee Operating Systems gaar ahaan GNU / Linux. Waxa intaa dheer bixinta heerka wanaagsan ee amniga iyo asturnaanta isku xirnaanta fog ee la sameeyay.
Shakhsi ahaan, waxaan isticmaalay qaar badan oo bilaash ah oo bilaash ah oo GNU / Linux ah, laakiin marka dadka isticmaala ama macaamiisha ay u baahan yihiin wax aad u adag, shaqeynaya oo lagu kalsoonaan karo, Waxaan aad ugula talinayaa inay tahay tartan loogu talagalay codsiyada leh astaamo la mid ah sida TeamViewer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » AnyDesk: Beddelka ugu fiican ee maaraynta kombuyuutarrada kumbuyuutarka
Hagaag, waan u adeegsaday in mudo ah runtiina waa mid wax ku ool ah marka laga reebo hal dhib oo aad u dhib badan, ma kuu oggolaanayso inaad maamusho howlaha maamulka taas oo aad muhiim ugu ah markaad rabto inaad wax fog hagaajiso, waxaan rajeynayaa in sidan lagu xaliyay qaabkan.
Ku jawaab Basilio Hernandez
Kuuma sheegi karo, maahan inaan sameeyo wax isaga horumarsan. Kaliya kormeer.
Markii ugu dambeysay ee aan isku dayo, waan heli kari waayey ikhtiyaarka aan ugu bilaabi karin nidaamka. Waxaan rajeynayaa in casriyeyntii ugu dambeysay ay ka saareen ikhtiyaarkan si ay awood ugu yeeshaan inay u qaabeeyaan.
Ku jawaab joselp
Waxaan ku joojiyay ikhtiyaarka Linux ee la yiraahdo fadhiga iyo bilawga. Halkaas ayaan ka hubiyaa culeyskiisa bilowga.
waan ansixineynaa, laakiin waxaan ku weydiinayaa: «macaamiisha waxay u baahan yihiin wax ka xoog badan, shaqeynaya oo la isku halleyn karo» waa barnaamijyada Linux-ka ee aan lagu kalsoonaan karin?
Ku jawaab guilds
Aaminaad ma ahan xagga kalsoonida (amniga iyo sirta) laakiin marka la eego waxqabadka horumarsan (xasilloonida + shaqooyinka). Laakiin waxaan u maleynayaa inaad sax tahay, taasi malaha eray sax ah oo ku jiray jumladdaas ...
Sam Hartman waa Debian cusub DPL
OnionShare: Wareejinta Faylka adoo adeegsanaya Shabakada TOR